01 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[25 / 08 / 2019] Avcılar Metrobus မီး! ခရီးသည်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[25 / 08 / 2019] ဓါတ်ရထားများအတွက် Deplacement အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ဖို့Alibeyköy	34 အစ္စတန်ဘူလ်
နေ့: သြဂုတ်လ 1 2019
Bursa Demirtas မြန်နှုန်းမီးရထား Viaduct4လေ့လာမှုအောင်မင်းအလုပ်သမားများပြီးဆုံး?
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအပေါ်မြေပြင်နှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားအပေါ်တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးရေး, အချို့ထံမှသတင်းစကားကိုမိုးရွာဖို့အစပြုလာတဲ့အခါဒီကော်လံ ... ခုနှစ်တွင်ဖတ်: "မြန်နှုန်းရထားမေ့နေ ... Bursa သည့်အခါအနာဂတ်။ " သိသာထင်ရှားတဲ့ ... ကျနော်တို့တောင်မှ, တိုင်းခြေလှမ်း, အသေးဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်းခေါ်ဆောင်သွားသည်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားမေ့လျော့ကြပြီမဟုတ် [ပို ... ]
Denizli သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး A.Ş. သွေးလှူဒါန်းခြင်းကင်ပိန်းအပြည့်အဝထောက်ပံ့
Denizli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, တူရကီလခြမ်းနီ Denizli သွေးလှူဒါန်းခြင်း Center က "မေမေ, အဘ, ညီအစ်မညီအစ်ကို, သားတော်ဆောင်ပုဒ်" တစ်ဖန်စနစ်တကျအသွေးတော်လှူဒါန်းခြင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်အတူလာရောက်ပူးပေါင်းအထိခိုက်မခံအပြုအမူပြ။ Denizli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကို, [ပို ... ]
ကပြင်းထန်စွာမြို့လယ်၌တည်ရှိ၏အဖြစ် Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖွဲ့များကျေးလက်ဒေသများရှိသူတို့၏အလုပ်ဆက်လက်နေကြသည်။ အဆိုပါဂုဏ်ထူးအသွားအလာသတိပေးချက်အထိကတ္တရာလမ်းအပိုင်းစတုန်နာရဲ့ Gedevet လမ်းလောင်းမတိုင်မီခဏ Alanya မြူနီစီပယ်အဖွဲ့များ [ပို ... ]
Kayseri Erkilet Boulevard ပြန်လည်ဆန်းသစ်
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, Erkilet အဆိုပါ Boulevard ၏ tarring အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıç, သူတို့ကစံချိန်စံညွှန်းများမြှင့်မှဆက်လက်မယ်လို့လမ်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံသားများ '' စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Erkilet Boulevard အတွက်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော် [ပို ... ]
တိုးချဲ့ Konya နယူးမော်တော်စက်မှု Complex Applications ကို
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ugur အီဘရာဟင် Altai, လူကြိုက်များဝယ်လိုအားအသုံးပြုပုံသူ2ယခင် Karatay စက်မှုဇုန်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စက်မှုလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အပလီကေးရှင်းများဘောင်အတွင်းသောကြာနေ့, သြဂုတ်လနယူးမော်တော်စက်မှုလက်မှုဇုန်သည်အထိတိုးချဲ့ဟုပြောသည်။ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Soyer Verdi İzmirimပထမဆုံးကလေးကဒ်များ
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, 0-5 ကလေးများအသက်ကလေးများİzmirimကတ်များကိုတွေ့နှင့်လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းများအနေဖြင့်စည်ပင်သာယာအတွင်းကိုးလ 10 မိသားစုများသုံးစွဲဖို့လက်ျာပေးခြင်း, ဒေသမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုပေး၏။ သြဂုတ်လİzmirimကဒ်ကနေကလေးများ [ပို ... ]
TCDD DPB ်ထမ်းခေါ်ယူမှုကြော်ငြာကျော်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
TCDD ကစားသုံးမှုအလုပ်သမားများကဖြန့်ချိထားတဲ့ကြေညာချက်စေမည်ကြေညာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပေါ်ထုတ်ဝေ DPB န်ထမ်းများစုဆောင်းမှုကြော်ငြာများ။ နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းရေးရာသမ္မတမှတစ်ဆင့်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကြေငြာချက်နှင့်အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD ၏ဝန်ထမ်းများအထွေထွေညွှန်ကြားမှုအကြောင်းကြားစာ, [ပို ... ]
တူရကီနိုင်ငံခြားသား၏ဤတွင် Living အရေအတွက်
2018 နှစ်ပေါင်း၏ရလဒ်များကိုအဆိုအရအခြေပြုပြည်သူ့အင်အားမှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်, ဒီဇင်ဘာလ 31 2018 ရက်စွဲနေရပ်လိပ်စာ, နိုင်ငံခြားလူဦးရေတူရကီအတွက်နေထိုင်တထောင် 1 211 34 လူဦးရေသန်းရှိခဲ့သည်။ တူရကီလူဦးရေရဲ့နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများ xnumx ရဲ့% ၏လူဦးရေ၏ 1,5% ဖြစ်ပေါ်လာသော [ပို ... ]
Antalya Selekler Undeleted ပယ်ဖျက်ဆုံးဖြတ်ချက် Stop
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အရာရှိများ, ဖျက်သိမ်းရေးရပ်တန့်အပေါ် Selekler ဆုံးဖြတ်ချက်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားတုံ့ပြန်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ stop, Antalya မြို့ပြန်ဆောင်မှုများကြောင့် selectin အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကနေဖယ်ရှားတုံ့ပြန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဆွဲဆောင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့မှတ်တိုင်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ [ပို ... ]
စပိန်အတွက်သပိတ်ပေါ်မီးရထားအလုပ်သမားများ Go ကို
အရာမီးရထားလမ်းကြောင့်သပိတ်၏ယေဘုယျအားဖြင့် (CGT) ၏စပိန်အထွေထွေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အတွက်လုပ်သားများတိုင်းပြည် 700 ရထားနှင့်အတူခေါ်ဆိုခကိုဖန်ဆင်းမျှမြင်အကြားထံမှလက်ခံရရှိသောရလဒ်များကိုအပေါ်စပိန်မီးရထားလမ်း (RENFE) နှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအထွေထွေအဖွဲ့ချုပ် (CGT) ပြည်ထောင်စုဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ရန် [ပို ... ]
rayhab 01.08.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
ဥပဒေရေးရာ Boulevard ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိဝန်ကြီး Turhan,
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan Trabzon သို့ရောက်ကြ၏။ Core, Trabzon အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအစ္စမေးလ်Ustaoğlu, Bayramçavuşနှင့်စက်ဝိုင်းအကြီးအကဲများနှင့်အတူအဝေးပြေးကားဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Selahattin Boztepe ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း av.salih Trabzon ဒုတိယဝန်ကြီး Turhan နွေAyvazoğlu, Adnan ကို Gunnar, မိုဟာမက်ပုဆိန်, [ပို ... ]
က start ကနေ Kartepe ရန်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို Remove
ကြီးမားသော Kartepe မြို့တော်ဝန် Mustafa, အ ropeway စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေမယ့်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်ကုမ္ပဏီ Valter ကန်ထရိုက်တာများနှင့်အတူနည်းလမ်းတွေခွဲကိုးကားပြီးစီမံကိန်းမစတင်နိုင်ပါတယ်။ Ozturk သတင်းအရသိရသည်Özgürkocaeliထံမှ Cemalettin; သူကရုံးသို့ကြွတော်မူပြီးနောက် "သမ္မတကြီးမားသော" ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီများသည်ကိုဖိတ်ကြား, [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကေဘယ်လ်ကားတရုတ်နှင့်ရုရှားအကြား Amur မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ Blagoveshchensk Heine ၏ရုရှားမြို့ပေါ်မှာတည်လိမ့်မည်သည့်နောက်ဆုံး cable ကိုကားတစ်စီးအပါအဝင် Amur မြစ်တစ်ခုရှစ်မိနစ်စီးနှင့်အတူတရုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ Blagoveshchensk အတွက်ကေဘယ်လ်ကား terminal ကို [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်Rantç Kent Sense သည်အတွက်ယာဉ်အသွားအလာ Chaos စေ
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Haluk အစစ်အမှန်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာ, ဒီပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်နှင့်မည်သို့စကားပြောဖြေရှင်းရန်။ Universal r ကနေသတင်းအရသိရသည် Meltem Akyol, "ငါသည်အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာများရေတွက်ပထမဦးဆုံးစိတ်ကိုမှကြွလာလို့ထင်ပါတယ်။ ယာဉ်အသွားအလာပိတ်ဆို့ဘယ်တော့မှမ, သောအချည်းနှီးသော Metrobus မလာဘဲ [ပို ... ]
Maher လက်စွဲစီမံကိန်း join ဖို့ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းကောက်ယူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းကိုİzmir Metro Inc ၏လက်မှတ်ကိုချီးမြှင့် ဝန်ထမ်း EBSO တှငျကငျြးပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာလက်မှတ်များနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနား, Izmir, မက်ထရိုနှင့်လမ်းရထားယာဉ်မောင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှတ်သားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Monster စွမ်းအင်လေယာဉ်မှူး Lewis က Hamilton နှင့် Valtteri xnumx'inc နှစ်တွင် Bottas Mercedes-AMG ကပက်ထရိုနပ်တပ်အားကစားအဖွဲ့သည်မော်တာအားကစားနှင့်အတူအများကြီးအောင်မြင်မှုတွေလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်ဖော်မြူလာ 125 ကားပြိုင်ကားများတွင်xnumx'üncပြိုင်ပွဲတစ် bumpy အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်ကျင်းပခဲ့သည်။ Mercedes-AMG ကပက်ထရိုနပ် [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 1 1919 ကမ္ဘာစစ်ငါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမီးရထားများတွင်
ယနေ့တွင်တာရှုမွို့-Adana-Mersin သမိုင်းသြဂုတ်လ 1 1886, လိုင်း၏တာရှုမွို့-Adana တစျပိုငျးကိုအတွက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။4ရေကြောင်းခရီးရှည်သြဂုတ်လအတွင်းကစတင်ခဲ့သည်။ Mersin-တာရှုမွို့-Adana လမ်းကြောင်း 66,8 ကီလိုမီတာ၏စုစုပေါင်းအရှည်။ သြဂုတ်လ 1 1919 ကမ္ဘာစစ်ငါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမီးရထားနှင့်ဆိပ်ကမ်းများတွင်ဆောက်လုပ်ရေးအောက်အဆင့်များသို့ခွဲဝေ [ပို ... ]
Avcılar Metrobus မီး! ခရီးသည်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြ
ဓါတ်ရထားများအတွက် Deplacement အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ဖို့Alibeyköy
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (376) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)